ဥရောပ၌ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပ၌ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
သင်မကြာမီဥရောပသမဂ္ဂသို့လာရန်စီစဉ်နေသည်ဆိုပါစို့. ထိုကိစ္စတွင်, အကြံပေးချက်များတစ်စီးရီးလည်းမရှိ အရေးကြီးသောခရီးသွားသတင်းအချက်အလက် သင်၏အတွေ့အကြုံကို ပို၍ ပျော်စရာကောင်းအောင်ကူညီလိမ့်မည်. တကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်မရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားဥရောပသို့သွားရန်လိုအပ်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားမည်သည့်နေရာမှနှိုင်းယှဉ်ပါ. နေဆဲ, က၏ကျယ်ပြန့် extension ကိုအတွင်း, ဥရောပသို့ခရီးသွား as ည့်သည်အဖြစ်ရောက်ရန်လိုအပ်သည့်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများရှိပါသည်. လည်း, အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောရာသီဥတု, ထူးအိမ်သင်, အဲဒီမှာစိတ်ကိုထားရန်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအထူးသဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်.
1. ဥရောပသို့ခရီးသွားခြင်း: သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုရယူပါ
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည်သင်၏အဓိကပြconcernနာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏တင်သည့်ကဒ်သည်သင်၏လက်ခံသူနိုင်ငံအတွက်သော့ဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအရင်ကျွေးပါမည်. မည်သည့်နိုင်ငံများသို့အထူးစာရွက်စာတမ်းများကိုမျှပြုလုပ်စရာမလိုဘဲမည်သည့်နိုင်ငံများသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်ကိုသင်ရွေးချယ်သောသင်၏အစိုးရအစိုးရကဆုံးဖြတ်သည်. သင်၏အိမ်နှင့် ဦး တည်ရာသံရုံးများသည်သင်သံတမန်ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်စာချုပ်တစ်ခုတည်မြဲနေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. အမေရိကနှင့်အရှေ့တောင်အာရှရှိနိုင်ငံအများစုသည်ဥရောပရှိနိုင်ငံအများစုကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိသောဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်.
ဒီကပြောသည်ပြီးလျှင်, သောအမှုမဟုတ်ဘူးလျှင်; သင်၏ခရီးသွားလာရေးခွင့်ပြုချက်များကိုပြင်ဆင်စဉ်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည့်တရားဝင်ခရီးသွားအကြံပေးကိုရယူပါ. ကျန်းမာရေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များလိုအပ်ပြီး၎င်းကိုလက်လှမ်းမီရန်သင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. သင်နိုင်ငံခြားတွင်ကားမောင်းလိုလျှင်, သင်လည်းလိုအပ်လိမ့်မည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်. သင်စီးပွားရေးလုပ်ရန်စီစဉ်လျှင်, ခရီးသွားရန်လိုအပ်သောအခြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်များစွာရှိနိုင်သည်. သင်၏ခရီးသွားရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်သည်ကိုလက်ခံနိုင်သည့်နိုင်ငံ၏အစိုးရဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်စစ်ဆေးနိုင်သည်.
ဥရောပသည်မတူညီသောတိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်, စပိန်ရှိနေသာသော Andalucia ကမ်းခြေများမှနှင်းဖုံးအရှေ့ဘက် Tundra အထိ. စိတ်ထဲရှိရာသီဥတုနှင့်သင်နိုင်ငံခြားတွင်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူထုပ်ပိုးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်. သင်သည်သင်၏တိုင်းပြည်မှထွက်ရန်ထုပ်ပိုးနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ, အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်အနည်းငယ်သာယူကြဘူး; ဒါကအဝတ်အစားတွေကိုကောက်ယူဖို့အချိန်နည်းသွားလိမ့်မယ်, လေဆိပ်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာမင်းကိုကူညီပေးပါ, နှင့်ပင် သငျသညျပိုက်ဆံကယ်တင် အားဖြင့် တစ် ဦး အဝလွန်ကြေးရှောင်ရှား. သင်၏ခရီးဆောင်အိတ်သို့မဟုတ်ခရီးဆောင်အိတ်စစ်တပ်ပုံစံကိုစုစည်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, မင်းဘောင်းဘီကိုလှိမ့်တယ်, ရှပ်အင်္ကျီများ, ခြေအိတ်, နှင့်တစ် ဦး ကုန်းမြေကဲ့သို့သောအတွင်းခံအဝတ်အစားများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်သူတို့အထူသူတို့ကိုထားပါ. ၎င်းသည်သင်၏အဝတ်အစားများခေါက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်သင့်အားတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအတွက်နေရာလွတ်စေသည်. သင်ခရီးစဉ်တွင် ၀ ယ်ယူခဲ့သောအဝတ်အစားများယူဆောင်လာလိုပါကဤအချက်သည်အသုံးဝင်သည်. အခြားအကြံဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုကတော့သင်၏လက်ဆောင်သို့မဟုတ်ဈေးဝယ်ပစ္စည်းများအတွက်အပိုအိတ်တစ်ခုထုပ်ပိုးရန်ဖြစ်သည်.
3. ဥရောပသို့ခရီးသွားခြင်း: မင်းကိုနိုင်ငံခြားမှာပြီးသုံးမယ်ဆိုတာမင်းရဲ့ဘဏ်တွေကိုအသိပေးပါ
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့သောခရက်ဒစ်ကဒ်ဖောက်ထွင်းမှုကြောင့်ဘဏ်များအနေဖြင့်လည်းအန္တရာယ်များကိုသတိပြုမိစေသည်. ၎င်းသည်၎င်းတို့အားပိတ်ပင်တားဆီးမှုတစ်ခုတွင်အသုံးပြုသောခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုတွေ့သောအခါနောက်ပိုင်းမူဝါဒကိုအရင်မေးရန်ဖြစ်သည်. သင်၏ဘဏ်သို့လူကိုယ်တိုင်ပြသခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့အားဖုန်းခေါ်ရမည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အွန်လိုင်းအသိပေးချက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်. ဤအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စျေးဝယ်စဉ်အန္တရာယ်ရှိသောနှင့်ရှက်စရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံများကိုရှောင်ရှားလိမ့်မည်. သင်ဘဏ်သို့သွားပါကသင်ရှိနေစဉ်အတွင်းဒေသန္တရငွေအချို့ရရှိရန်မှာလည်းကောင်းပါသည်. ဥရောပစျေးဆိုင်အများစုတွင်ခရီးသွား for ည့်သည်များအတွက်ငွေလဲလှယ်နှုန်းမှာစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မြင့်တက်နေပြီး၊ ဖလှယ်မှုအချက်များ.
4. ဥရောပသို့ခရီးသွားခြင်း: ပြန်လာပြီ
သင် "ဟောငျးတိုက်ကြီးကိုသွားနေလျှင်,သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုသင်နှင့်အတူယူဆောင်လာရန်နှင့်လိုအပ်သောနိုင်ငံတကာခွင့်ပြုချက်များအတွက်ပေးချေရန်သတိရပါ. အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံအတွင်းသို့မတူညီသောနိုင်ငံများသို့လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ပါကဤစာရွက်စာတမ်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် ဥရောပဥပဒေပြဌာန်း. သင်တစ် ဦး လမ်းခရီးစဉ်စီစဉ်နေလျှင်, ဒါကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်နှင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သည်. လည်း, သတိရပါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထုပ်ပိုး သင်ပြည်ပတွင်သင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ရာသီဥတုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်. သင်၏ငွေကိုသုံးစွဲရန်နှင့်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်သာပြုလုပ်ရန်သင်စီစဉ်သောမည်သည့်နိုင်ငံများတွင်အမြဲတမ်းသတင်းပို့ပါ. နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောလူတို့နှင့်အဆက်အသွယ်ရတဲ့ပါတယ်, အစားအစာများ, ယဉ်ကျေးမှုများ, ပျော်စရာရှိသည်နှင့်အတွေ့အကြုံခံစားရန်မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်.
သင်သိရန်လိုအပ်သမျှကိုယခုသင်သိပြီ, ငါတို့မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏အခြားရထားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သင့်အားအသင့်ရှိနေသည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ဥရောပ၌ခရီးသွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိထားသင့်သမျှအရာအားလုံး” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feverything-know-traveling-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ဥရောပသမဂ္ဂ eurotrip အသိပညာ ခရီးသွား traveltips